Dhabaha Diyaaraduhu soo Caga-dhigtaan ee Hargeysa Oo Shalay Gal-biyo Ah Isu Rogay & Wasaaradda Duulista oo Cadceeda Sacab Ku Qarinaysa | Burco Media
Dhabaha Diyaaraduhu soo Caga-dhigtaan ee Hargeysa Oo Shalay Gal-biyo Ah Isu Rogay & Wasaaradda Duulista oo Cadceeda Sacab Ku Qarinaysa
Hargeisa-(BM)-Madaarka Caalamiga ah ee Caasimadda Hargeysa ayaan Haba yaraatee ilaa shalay wax Diyaarad ahi soo Fadhiisan, kadib markii roob xidhiidh ahi 48-kii saacadood ee lasoo dhaafay uu dalka ka da’ayay isla markaana ay diyaaraduhu garoonka ka waayeen wax isgaadhsiin ah oo uu kaga warbixin karo xaaladaha Noocan Oo Kale ah iiyo xilliyada roobabku jiraan. Geggida ayaa sida ay sheegayaan warar wargeyska Hubaal helay ay Diyaaradihii waaweynaa ee soo fadhiisan lahaa Tahli kari waayeen inay isku aaminaan, maadaamaa uu aad u Gaaban yahay dhabaha ay ka haadaan ama soo caga-dhigtaan (Run Way) ee Garoonku, islamarkaana ay da’ayeen roobab badan oo ay diyaaraddu u baahan tahay inay hesho meel weyn oo ay xawaare ku dhaafto.
Geggida oo wasiirka Duulistu sheegay inuu Geliyey lacag aad u badan islamarkaana Buuq badani ka dhashay dib u habayntiisa, ayaa haatan ay soo baxeen cilladihii looga werwersanaa ee ay mas’uuliyiinta wasaaradaasi qarinayeen, waxana Haatan Diyaaradihii waaweynaa ku khasbanaadeen inay garoonka ka waashaan oo aanay ka soo degin.
Sababta kale ee ay garoonkan Diyaaruduhu u soo fadhiisan waayeen ayaa ah inaanu garoonku lahayn wax is gaadhsiin ah oo casri ah oo ay shaqaaluhu garoomada kale ugu gudbin karaan cilladaha soo kordha, marka laga reebo Hal Fooniye oo lagula xidhiidho Nairobi, kaas oo kaliya lagu Gudbiyo Duulimaadyada ka baxaya caasimadda si aanay u dhicin wax isku dhac ahi. Arrintan isgaadhsiin la’aanta ah ayaa wax markhaati ka ah in dhammaantood diyaaraha Maalintii shalay ka baaqday Garoonku ay dhammaantood ku soo Hungoobeen Garoonka oo ay si toos ah u soo galeen Hawada Somaliland, intaas ka dibna loo sheegay inaanay soo fadhiisan Karin oo ay iska noqdaan. Sida ay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen Garoonka Cigaal International Airport waxa kaliya uu la xidhiidhaa Garoonka Magaalada Nairobi, balse lama xidhiidhi karo wax garoon ah oo kale, waxana taasi ay ku keentaa dib u dhac iyo iska warheyn la’aan badan oo xagga shaqada ah.
Inkasta oo ay mas’uuliyiinta Wasaaradda Duulistu dhibaatadan ku timi Garoonka ku riixeen dhinaca cimiladda, haddana waxa taas beenisay markii ay diyaaradihii qaar ka mid ahi u baydheen dhinaca madaarka Berbera oo uu ka da’ayey Roob ka badan ka Hargeysa Helay, waxase sababta ay diyaaraduhu u fadhiisteen ay tahay inuu leeyahay Run-way ka ballaadhan ka Hargeysa oo u saamaxay inaan roob looga Baaqan garoonka.
Maqnaanshaha Diyaaraha ee Madaarka Hargeysa, ayaa dhibaatooyin badan oo dhinacyo badan leh sababay, waxana ay dhibaatadaasi ku timi shirkadaha Diyaaradaha, Dadkii Rakaabka ahaa ee tegi lahaa iyo kuwii soo degayey oo meelo fog fog la geeyey iyo waliba xukuumadda Somaliland oo halkaas ku weyday malaayiin lacag ah oo soo geli jirey. Wasaaradda Duulista Hawada ayaa iyadu weli ku adkaysanaysa oo isku dayeysa inay sacabada ku qariso ceebtan sida cadceedda u muuqata, waxana ay shacabka cudur daar uga dhigeen in arrinan ay keentay Rooobabka Da’ayaa, balse waxa markhaatiga ku furtay markii Diyaaradihii qaar ka mid ahi fadhiisteen Madaarka Berbera oo ka sii roob badan. Duulimaadyadii Imaaraadka, Itoobiya iyo Muqdisho ee shalay soo fadhiisan lahaa madaarka Hargeysa ayaa u leexday Garoomada Dir dawa (Diri-dhaba), Jabuuti iyo Magaalada Berbera markii ay warkaas heleen intii ay hawada Somaliland ku jireen.
Diyaaradda Itoobiya Air-line ayaa ku laabatay magaaladda Diridhaba, halka diyaaradda Jubba ay u laabataya dhinaca Dalka Jabuuti oo ay ka degtay, diyaarada African Airways oo iyana ka soo duushay Dubai ayaa iyana markii ay ka noqotay Hargeysa ku degtay Berbera. Dhinaca kale waxa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa Cabashada shirkadaha diyaaraduhu ka keenayaan Tayada Garoonka Hargeysa iyo Run-way-giisa oo ay saluug badan ka muujinayaan, waxase taas iska giijinaya oo aan dheg jalaq u siinin wasiir Maxamuud xaashi Cabdi oo markii uu ka takhalusay Agaasimihii ay muddada badan oo wada shaqaynayeen Haatan keligii u hadhay mashaariicda faraha badan ee wasaaradda Hoos yimaadda. Madaxweyne Siilaanyo oo dhawr goor loogu Baaqay inuu wax ka qabto dhibaatada Garoonka diyaaradaha Hargeysa, ayaan ka jawaabin soo jeedimahaas shacabka ka yimi, waxana uu wasiirkiisa u sheegay inuu xorriyad Buuxda u haysto hawlaha wasaaradda oo aanu cidna u dhegaysanayn.